Videogames - Nkọwa
🎮 Onye 4: Ịgba egwu abalị niile 【Ntụle ma budata ✅】
Ọgbaghara Eletriki Onye 4: Ịgba egwu abalị niile bụ ntụgharị ọhụụ kachasị ọhụrụ nke RPG kpochapụwo 2008, Persona 4, yana dịka aha ya na-egosi, ọ bụghị RPG, kama ọ bụ egwuregwu egwu. Ọ bụghị echiche dị egwu ma ọlị - aha Persona bụ ...
🎮 fifa16 【Ntụle na budata ✅】
Ogologo ahịrị a na-etibeghị. Bọọlụ! Site na ndetu obi ụtọ ahụ na-ese n'elu ikuku, biko nye m oge doro anya. FIFA bụ egwuregwu siri ike ịtụ. Ọ bụ mkpokọta ọtụtụ afọ nke atụmatụ na ụdịdị, a na-agbanwe ha niile na emelitere n'ọkwa dị iche iche yana ...
🎮 Blood Bowl 2 【Ntụle na nbudata ✅】
Bọọlụ, kedu bọọlụ? Anọ m ebe mgbapụ abụọ ma ha abanyebeghị na ọkara nke ubi m, mana m ga-atụfu. N'egwuregwu ndị gara aga megide ọchịchịrị elves, dwarves, na elves dị elu, atụkwasịrị m obi na itinyekwu ndị egwuregwu mmadụ n'akụkụ ogre m, ka ...
🎮 Disgaea 5: Alliance of Vengeance 【Ntụle na budata ✅】
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nnukwu ihe dị mma. Disgaea: Oge awa nke ọchịchịrị eruola ugbu a ka e were ya dị ka SRPG kpochapụ. Ka bụ egwuregwu ama ama na katalọgụ na-eto eto nke Nippon Ichi Software, aha ahụ webatara ndị egwuregwu na Underworld na ...
Disgaea 4: nkwa agaghị echefu echefu 【Ntụle na budata ✅】
Ọgụ ọgụ na-adọrọ adọrọ etolitebeghị nke ukwuu, mana nnukwu ihe odide na ide ihe na-atọ ụtọ mgbe niile na-eme Disgaea 4 ụtọ. Usoro Disgaea ejikọtala akụkọ ọjọọ na nke na-atọ ọchị mgbe niile.
🎮 LEGO Dimensions 【Ntụle na budata ✅】
Mgbe ụwa na-agbakọ. Akụkụ LEGO na-amalite n'ụzọ pụrụ iche: ọ na-arịọ gị ka ị ghara igwu egwu. Mgbe obere ọrụ dị mkpirikpi na cursory na egwuregwu ahụ gasịrị, akụkụ ahụ na-aga n'ihu wee rịọ gị ka ị hapụ njikwa wee wuo (iji ezigbo LEGO iberibe) portal ...